Afrika, 01 January 2018
Tirada Soomaalidii lagu diley K. Afrika, 2017
Soomaali badan ayaa lagu diley sanadihii la soo dhaafay dalka Koonfur Afrika. dilalkaas ayaa sii kordhey sanadkii tagey ee 2017-ka.
Kenya oo sheegtay inay gudaha Kenya ku dileen 5 Shabaab ah
War qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada Kenya ayey ku sheegeen in shaley abbaare lixdii maqribnimo deegaanka Linda Boni ay ku weerareen maleeshiyaad al-Shabaab ka tirsan, kuwaas oo la tuhmayo inay ka dambeeyeen weerar Sabtidii dhaweyd ka dhacay deegaanka Ijara ee Gaarisa.
Warbixin: Weerarada Mareykanka ee Soomaaliya
Sannadkan, Maraykanku waxuu kordhiyey duqaymihii uu ka gaysanayey Soomaaliya, isagoo bishan gudaheeda qaaday illaa 4 weerar.
Rag Hubeysan oo Weeraray Kaniisad Ku Taalla Masar
Ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen shan kalana ay ku dhaawacmeen, weerar ay maleeshiyo hubeysani maanta ku qaadeen Kaniisad ku taalla Koofurta magaalada Qahira ee caasimada Masar.
AFRICOM: Waxan ka hortagnay isku day qarax oo shacabka Muqdisho lagu wax yeelleyn lahaa
Mareykanka ayaa sheegay inuu duqeyn ku dilay afar ka tirsan maleeshiyada ururka al-Shabab isla markaana uu burburiyay gaari ay walaxaha qarxa saaraayeen.
Meydadka dad Soomaali loo maleynaayo oo laga heley Mozambique
Wararka imanaya dalka Mozambique ayaa sheegaya in laga helay dalkaasi maydka 13 qof oo loo malaynayo inay Soomaali yihiin.
Kenya oo dalkeeda ka mamnuucdey Shiishadda
Dowladda Kenya ayaa mamnuucdey isticmaalka iyo ka ganacsiga tubaakada Shiishadda ama Hookah oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badaneysay dalkaas.
Jabuuti oo laga hergaliyay mashruuc isgaarsiineed oo isku xiri doona dalal dhowr ah
Magaalada Djibouti waxa maanta laga dhaqaajiyey hir galinta mashruuca DARE oo laga soogaabiyay Djibouti Africa Regional Express oo ah khadadka is gaarsiinta ee is ku xidhaya Jabuuti, Berbera, Bosaaso, Muqdisho, Mombasa iyo Dares Salaam.
Dadka Reer Liberia oo Maanta Sugaya Natiijada Doorashada
Dadka reer Liberia ayaa maanta oo Khamiis ah ka war-dhowraya qofka uu noqon doono madaxweynahooda lixda sano ee soo socota.
Dalka Laybeeriya oo Doorasho loo Dareeray
Baarlamaanka Uganda oo Ansixiyay Sharci Cusub
Baarlamaanka dalka Uganda ayaa aglabiyad xoog leh ku ansixiyay sharci meesha ka saaraya xaddidaada da,da musharaxiinta doorashada madaxweynaha, taasoo waddada u xaareysa in mid ka mid ah madaxweynayaasha Africa ugu muddada dheer uu Uganda sii xakumo ilaa 2031-ka.